Fiilmii yookiin faayilii sagalee galmee keessaa saaguuf.
Bakka faayilii saaguu barbaaddutti cuqaasi.
Akaakuuwwan faayilii qaaqa kana keessatti tarree ffaman sirnoota dalagamaraan hin deeggaramne.
Fiilmii yookiin faayilii sagalee taphachiisuuf
Fiilmii yookiin faayilii sagalee galmee kee keessatti sajoo wantaa irra cuqaasi.
Kamshaan Sabqunnamtii duubatti taphadhuu ni mul'ifama.
Kamshaa Taphachiisa duubatti meeshaalee sub qunnamtii irraatti Taphachiisii cuqaasi.
Yeroo dhihessa toleessaa mul'istu, sagaleen idaatii yookaan viidiyoo islaayidii ammee hanga dhumutti yookaan hanga islaayidii gadhiiftutti ofumaan taphata.